MACLUUMAADKA TARANKA ORI PEI DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Pug / Shar-Pei eeyo isku dhafan oo isku dhafan
Xamaaliinta Ori-Pei (Shar-Pei iyo Pug ey isku dhafan)
Pug ilaa Pei
Ori Pei ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Baabuur iyo Shar-pei . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Ori Pei waxaa laga abuuray Waqooyiga Ameerika 1970s. Bixiye la yiraahdo Aaron Silver wuxuu jeclaa Shiinaha Shar-Pei, laakiin ma uusan jeclayn dhammaan dhibaatooyinka caafimaad ee inta badan lala xiriiriyo, sida indha-indheynta, dhibaatooyinka maqaarka iyo sinta dysplasia. Wuxuu rabay inuu yeesho nooc yar oo ka mid ah Shar-Pei iyada oo aan dhammaan dhibaatooyinka caafimaad. Wuxuu adeegsaday Shar-pei iyo Baabuur si loo abuuro Ori Pei.
american bulldog shay mix puppy puppy
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Ori-Pei x Pug = Pug-A-Pei
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynta = Ori-Pei x Pug = Pug-A-Pei
Diiwaanka Canine-ka Caalamiga ah ee naqshadeeye®= Ori-Pei x Pug = Pug-A-Pei
Diiwaangeliyuhu Nooca Diiwaanka = Ori-Pei x Pug = Pug a Pei
Diiwaangeliyaha Taranka Nashqadeeyaha = Shiinaha Shar Pei x Pug = Ori-Pei
'Kani waa Wrigly, eey yar yar oo loo yaqaan' Ori Pei '. Sawirkaan waa 9 todobaad. Waa nin saaxiibtinimo badan oo ciyaar badan. '
Roxy the Ori-Pei (Shar-Pei iyo Pug ey isku jira)
Kubuli the Ori-Pei puppy at 7 bilood jir
Toby Ori-Pei oo 8 toddobaad jirsaday (Pug / Shar-Pei iskudhafka eyda yaryar)
Beatrice the Ori Pei - milkiilaheeda ayaa leh, Waxay hada jirsatay afar sano, waxayna la yaabtay qoyskeyga. Waxay dabeecad aad u weyn oo cajaa'ib leh la leedahay carruurta. Waxaan guriga ku jabnay hal toddobaad iyo badh, aad bayna u fududahay in la tababaro. Ori-Pei waa nooc qurux badan, waxaanan si aad ah ugu raaxaystaa iyada oo qayb ka ah qoyskayga. _ ^ '
Boston muqisho isku darka shaybaarka Pit sale
Ori-Pei eey, waxaa iska leh sawirka Ruth Shoemaker
Barkley sida kuup.
Barkley dhammaantood way koreen.
Eeg tusaalooyin badan oo ka mid ah Ori Pei
Sawirada Ori Pei 1
Sawirada Ori Pei 2
Sawirada Ori Pei 3
Sawirada Ori Pei 4
Liiska eeyaha Shar-Pei Mix eeyaha
Liiska eeyaha Pug Mix Taranka
eyda ugu caansan 2015
adhijirka Australiyaanka ah ee isku darsada cunugga dahabiga ah eey
xuduuda collie spaniel mix puppy
cagaha eey dibedda ayey u jeedaa markay taagan tahay
Jarmalka adhijir isku dhafan isku dhafka collie